सरकारले फटाफटा काम गर्दै, कोटेश्वर–कलङ्की सडकमा बन्दैँछन् थप छ आकाशे पुल ! | suryakhabar.com
Home पु.समाचार समाचार सरकारले फटाफटा काम गर्दै, कोटेश्वर–कलङ्की सडकमा बन्दैँछन् थप छ आकाशे पुल !
सरकारले फटाफटा काम गर्दै, कोटेश्वर–कलङ्की सडकमा बन्दैँछन् थप छ आकाशे पुल !
on: ७ मंसिर २०७५, शुक्रबार १६:२९ In: समाचारTags: No Comments
ललितपुर । कोटेश्वर–कलङ्की सडकमा थप छ स्थानमा आकाशे पुल बन्ने भएको छ । चिनियाँ सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माणाधीन सो सडकमा तीन ठाउँमा पुल बनाउने सम्झौता भएको थियो । पैदल यात्रुलाई सडक काट्नका लागि असहज भएपछि थप सात ठाउँमा आकाशे पुल बनाउन सरकारले शुरु गरेको हो । चिनियाँ निर्माण कम्पनी सङ्घाइ निर्माण सेवा समूहलाई काठमाडौँ चक्रपथ सुधार योजनाले समन्वय गरिरहेको योजनामा कार्यरत इञ्जिनीयर नीरञ्जन शर्मा अर्यालले बताए ।
योजनाले नै थप सात स्थानमा आकाशे पुलको जिम्मेवारी लिएको छ । उनले भने, “तीमध्ये कुनैमा काम शुरु भयो कुनैमा हुने क्रममा छ, कुनैमा भने ठेक्का सम्झौता हुन नै बाँकी छ ।” चिनियाँ आफैँले कोटेश्वर, ग्वार्को र बागडोलमा आकाशे पुलको निर्माण गरिसकेको छ । सरकारले गर्ने भनिएका सात ठाउँका आकाशे पुल दुई वर्षमा सकिने योजनाले जनाएको छ । बालकुमारी, सातदोबाटो, एकान्तकुना र बल्खुमा आकाशे पुल निर्माण भइरहेको छ ।
शर्माले भने, “चारै स्थानमा जगको काम सकिएर पिलरको काम अघि बढेको छ ।” महालक्ष्मीस्थान र सानेपामा भने काम शुरु भइसकेको छैन । यी दुई स्थानमा ठेक्का सम्झौता भइसकेकाले केही समय पछि काम शुरु हुनेछ । नेपालको पहिलो आठ लेन सडकका रुपमा रहेको यो सडकको ठेक्का सम्झौता आगामी डिसेम्वरमा सकिँदैछ ।
जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न सरकारसँग कांग्रेसको माग
होसियार ! बक्यौता नतिर्नेको लाईन काटिदैँ
२८ जेष्ठ २०७७, बुधबार ०९:३२
२८ जेष्ठ २०७७, बुधबार ०८:५९
२८ जेष्ठ २०७७, बुधबार ०७:४७
७ मंसिर २०७५, शुक्रबार १६:२९